Transfering Data si iOS Devices ka HTC ekwentị mkpanaaka na
Otu n'ime ndị kasị atụ anya smartphone emepụta taa bụ HTC. Dị ka CNET akụkọ, ya flagship nlereanya HTC One M8 adọta 23% nke iPhone ọrụ n'ime otu ọnwa kemgbe ya ntọhapụ. Na smartphone emepụta atọhapụ ọhụrụ na ngwaọrụ kwa afọ, nkeji oge ka ịgbanwee a ọhụrụ ekwentị na-aghọ mkpumkpu. Echiche nke upgrading ka a ọhụrụ smartphone nwere ike ụda na-akpali akpali, ruo mgbe ị na-atụle-ebufe data si gị ochie handset ọzọ.
Dị ka a ugbu a iOS ngwaọrụ onye ọrụ, ị na-eleghị anya ihu a nsogbu nke na-ebufe gị data ọhụrụ gị HTC ekwentị ebe ha na-kpam kpam adịghị mkpa mobile nyiwe. Ọtụtụ ndị mmadụ na were ogologo awa na-azọpụta ha photos, na vidiyo na kọmputa, na-eme ka a nyefe si na kọmputa na-ọhụrụ ha HTC ngwaọrụ. Ụfọdụ na-nwetara faịlụ a na-agafere ịga nke ọma, ma ihe ọjọọ àgwà, ma ọ bụ ọnwụ nke ụfọdụ faịlụ n'oge usoro. Site videos na foto na ị na weghaara, ka ọtụtụ narị music gị ebudatara, na ọtụtụ puku ozi ederede na ị na zitere na natara, gị ochie smartphone bụ na-akụ obi, na ndị a data ekwesịghị mie ala.
Ngwọta dị mfe: 1 Pịa nyefee data si iPhone ka HTC
Taa, unu adịghị mkpa nyefee gị data nke nta nke nta. Na otu click nke Wondershare MobileTrans, ị nwere ike nyefee ihe ọ bụla faịlụ i chọrọ akwagakwa, na ị ga-enweta bụla n'ihe ize ndụ ma ọ bụ àgwà ọnwụ n'oge gị nyefe. Ọ bụ 100% nchebe, na àgwà bụ kpọmkwem otu ihe ahụ dị mbụ otu. Karịsịa, a software bụ otú nchebe na mfe iji.
MobileTrans Na-mepụtara kpọmkwem maka fọrọ nke nta niile ọrụ nke iche iche na ngwaọrụ na netwọk, gụnyere HTC, Samsung, Sony, ZTE, Apple, Huawei, Nokia, LG, Google, na Motorola. Akwagakwa data na igwe nke dị iche iche na-ebu. Ọtụtụ puku ngwaọrụ dabeere iOS, Android, na Symbian na-akwado site na nke a software. Enweghị ihe ọ bụla mgbalị, nke a software bụ ike idetuo na nyefee niile foto, kọntaktị, music, vidio, na SMS ozi ederede.
• Weghachi si Backups - Ị nwere ike ugbu a na-echekwa gị ndabere faịlụ gị ọhụrụ ekwentị site iTunes, Blackberry, na Kies. Mgbe ị na-ndabere faịlụ, ọ dịghị mkpa ka nchegbu banyere onye ọmụma ma ọ bụ data ọnwụ ebe a mmemme 100% mma.
• ndabere ekwentị data - Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta ụfọdụ dị mkpa data, i nwere ike ndabere ha ka ha Mac OS X ma ọ bụ Windows PC.
• Ihichapu ochie ekwentị data - Ị nwere ike ugbu ihichapu gị ochie ekwentị data ọcha onye ozi.
• Ofụri Esịt dakọtara na iOS 9
Iji Wondershare MobileTrans nyefee data site na iPhone ka a HTC
Na enyemaka nke MobileTrans, transfering niile dị mkpa faịlụ, gụnyere video, kọntaktị, SMS ozi, oku na ndekọ, photos, music na listi ọkpụkpọ n'etiti ekwentị mkpanaaka na, na-aghọ ngwa ngwa na mfe. Ị pụrụ ọbụna nyefee gị onye kalenda mfe!
Nzọụkwụ 1. Download MobileTrans gị na kọmputa na mgbe ahụ na-agba ya.
Tupu ịlụ malitere, ị kwesịrị ị na ibudata MobileTrans software na kọmputa gị. Ozugbo ọma ebudatara, wụnye ya. Ozugbo arụnyere, ẹkedori ya. Mgbe ị na-okokụre on usoro a, ị ga-ahụ bụ isi window.
Cheta na: Tulee ma ị rụnyere iTunes na kọmputa gị tupu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ wụnye software, ma ọ bụ ihe ọzọ ị ga-rụchaa ihe i malitere. Ọ bụrụ na maka oge ị naanị iPhone, ma i nwere ike weghachi gị HTC ngwaọrụ e mesịrị, ndabere data akpa ke gị iPhone na kọmputa.
Step2: Jikọọ Abụọ nke ngwaọrụ gị ka gị na kọmputa
Mgbe nbudata software, ị ga-ahụ abụọ isi ngalaba na ngwá ọrụ. Ị ga-ejikọta ngwaọrụ abụọ. Site USB cables, jikọọ iPhone na HTC ngwaọrụ gị na kọmputa. Na sekọnd ole na ole, na ngwá ọrụ ga-egosipụta nkọwa na onyinyo nke Smartphone, na ndị ọzọ ngalaba, ya counterpart. Ugbu a, chọpụta gị isi iyi na nzube ngwaọrụ site tụgharịa bọtịnụ. Ozugbo ejikọrọ, gị window kwesịrị anya dị ka nke a:
Cheta na: The kpọọ ngwaọrụ gị ga-egosipụta dị ka "Isi Iyi" na "Destination". Isi Iyi bụ gị iPhone, mgbe ndị na-aga bụ gị HTC ekwentị. Ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị ịgbanwe ebe gị ngwaọrụ abụọ, i nwere ike pịa "tụgharịa," bụ nke a-acha anụnụ anụnụ bọtịnụ. Ozugbo ha jikọọ, jide n'aka na ha na-ahụrụ site na kọmputa gị.
Dị ka ị maara, iOS sistem na Android sistem dị iche iche na data apụghị na-akọrọ si onye na ibe-nke a abụọ dị iche iche ngwaọrụ. Nke a mere, kama na iji aka usoro, ị nwere ike USB Wondershare MobileTrans nyefee data site na iPhone ka a Motorola ekwentị.
Step3: Malite idetuo data gị iPhone gị Motorola ekwentị
Mgbe ị na-ahọrọ data na-ịchọrọ ị ga-agafere, gị niile data ma ọ bụ nanị ole na ole, ị ga-iji Malite Copy bọtịnụ. Ị ga-enwe ike ịhụ data gị isi iyi iPhone na ike ga-zigara gị ebe Motorola ekwentị.
Ka ị pụrụ ịhụ, e nwere data na gị isi iyi ekwentị. Ndị a data depụtara na n'etiti, dị ka photos, kọntaktị, ozi, na wdg, nwere ike bufee. Ihe ị chọrọ ime bụ kaa data si iOS ịkwaga ọhụrụ gị HTC ngwaọrụ. Ozugbo akara, pịa "Malite Copy" button, wee pịa "dechara" button ozugbo dechara.
MobileTrans Ike ịnyefe égwu na dakọtara n'etiti abụọ ngwaọrụ, ọ bụghị ngwá ọrụ bụ smart ezuru igbochi kedi Nkea. Dabere na n'ókè ma ọ bụ ibu ibu nke nwere ị na-ewega ọhụrụ gị na ekwentị, nyefe nwere ike iri oge ụfọdụ. Ọ ga-ewe ọtụtụ minit rụchaa mgbe ị nyefee ihe karịrị 12,000 ozi ederede site na iPhone ka HTC, ma ruo ọtụtụ puku photos, nyefe ga-ewe ogologo oge - awa abụọ.
Cheta na: N'oge nyefe usoro, biko jide n'aka na ma igwe na-mgbe niile jikọọ kọmputa gị. Ma, ị ga-mgbe ịrụcha. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na efu gị ebe ekwentị tupu ebufe, na-aga na ebe ekwentị foto, ma chọta "Clear data tupu oyiri" n'okpuru na ya.
Nke HTC Ngwaọrụ Ị Jiri?
• HTC mbụ
• HTC Ọchịchọ Eye
• HTC One M8 na Windows
Top 4 Ụzọ Efu Igwefoto Roll si iOS 7 Devices
> Resource> iOS> otú nyefee Data si iOS Devices ka HTC ekwentị mkpanaaka na